सस्तो मूल्यमा खाना खान बिहान नाै बजेदेखि बेलुका नाै बजेसम्म हाम्रो खानाघरमा भिड लाग्ने गरेको छ। एकपटकमा ५२ जनाले खाना खान सक्ने हाम्रो खानाघरको भान्सादेखि खाने ठाउँसम्म चिटिक्क र सफा छ ।
दैनिक एक हजारलाई खाना खुवाउने लक्ष्य बोकेर हाम्रो टिम नेपालले हाम्रो खानाघर गत १७ माघदेखि सञ्चालनमा ल्याएको हो । हाम्रो खानाघर कम आम्दानी हुने, ज्याला–मजदुरी गर्नेहरूको मात्र होइन, सस्तो र राम्रो खाना खानेहरूको लागि उपयुक्त गन्तव्य बनेको छ ।
आजबाट अनामनगरमा हाम्रो खानाघर खुलेछ । एक छाक सादा खानाको रु ६५/- मात्र !
अनि यसबाट बंचेको पैसाले असहाय, बिपन्न लाई सहयोग गर्ने उदेश्य रैछ । हैन त राम्रो काम ? कोही त छ नि नसक्नेको बारे सोंच्ने ❤️ pic.twitter.com/jckJyLyshI
— Anjan Bhandari (@moksh__a) January 31, 2021
हाम्रो टिमद्धारा अनामनगरमा ६५ रुपैँयामा शाकाहारी खानाघर सञ्चालन
हाम्रो टिम नेपालद्वारा सस्तोमा खाना खुवाउने रेस्टुरेन्ट सञ्चालन